Mitambo yakanakisa yakavanzika ya2019 neshanduro dzeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Mitambo yakanakisa yakavanzika ya2019 neshanduro dzeLinux
Kunyangwe Linux yakaburitsa kufarira kwemazhinji emakambani ekuvandudza software, havazi vese vanofarira iyo yakavhurika sosi rezinesi modhi. Mune chinyorwa chakapfuura takaongorora runyorwa rwemahara software mitambo inosarudzwa ne Kubhejera Pane vaverengi veLinux. Ino yave nguva yekuita runyorwa rweakanakisa epamhepo software inowanika kune yedu yekushandisa system.
1 Mitambo yakanakisa yekudyara yeLinux yegore 2019
1.1 Mumvuri weTomb Raider: Definitive Edition (Winner)
1.2 Ponda Spire
1.3 Ion Hasha
1.4 Oxygen Isina Kubatanidzwa
1.5 Upenyu Hwakasimba 2
Mitambo yakanakisa yekudyara yeLinux yegore 2019
Mumvuri weTomb Raider: Definitive Edition (Winner)
Chinhu chekutanga chaunosangana nacho kana uchipinda peji yemutambo pane Steam ine ichi chiziviso.
Zvemukati zveichi chigadzirwa zvinogona kunge zvisina kukodzera kumazera ese kana pakuona pabasa.
Ropa Rine Chisimba
Uye chisungo chekuisa zuva rako rekuzvarwa usati waenderera.
Mumvuri weTomb Raider Definitive Edition zvakare ine mukadzi protagonist, kunyange nyaya yacho isiri yemhosva seiya yemumwe mutambo watokurukurwa. Saizvozvo, Ichi chitsauko chekupedzisira chenyaya nezve mabviro aLara Croft. Apa ndipo paanova gororo remakuva raanofanirwa kuve.
Mune ino yakatemwa edition isu tinokwanisa kuwana mutambo wekutanga uye zvinomwe zvinokwanisika zvemukati zvinonetsa kumakuva, pamwe nezvombo zvekurodha pasi, zvipfeko uye kugona.
Mamwe ematambudziko atinozosangana nawo muganda raLara:
Kurarama munzvimbo inouraya pasi pano: Tichafanirwa kugona nzvimbo isina kusimba yesango, apo isu tichiongorora nharaunda dzemvura dziri pasi pemvura dzakazara nemakomba nematanho masisitimu.
Pindirana nesango: Kuve vashoma uye vasina kushongedzwa zvakanaka, zvakafanira kuti tidzidze kutora mukana wezve mukana wesango
Tsvaga marinda erima uye asina tsitsi: Kune izvi isu tichafanirwa kushandisa matekinoroji epamberi kuti tivasvike uye, kana tangova mukati, kurodza kugona kwedu kugadzirisa mapuzzle anouraya.
Tsvaga iro Rakavigwa Guta
Izvi ndizvo mutambo nokuti single player kusanganisa maficha kubva kumakadhi emitambo uye mitambo yegomba.
Pakati pezvinhu izvo Slay the Spire zvinokurudzira ndezvi:
Gadzira dhizaini yemakadhi akasiyana.
Tsvaga zvisikwa zvisingazivikanwe.
Tsvaga zvisaririra zvesimba rakakura.
Kwira kune Tsono.
Iko kune akawanda musanganiswa wemakadhi saka iwe unofanirwa kusarudza iwo anoshanda zvakanyanya pamwechete kana uchibvisa vavengi nekusvika pamusoro. Unogona zvakare kusarudza nzira yakachengeteka kana ine njodzi.
Pano isu tine rimwe zita haikodzeri kukodzera vanhu vanonzwisisika. Kubva pane rondedzero yevagadziri vayo.
Mutambo uyu unogona kunge uine zvemukati zvisina kukodzera mazera ese kana kuona pabasa: kazhinji chisimba kana gore, zvakajairika zvevanhu vakuru
Kuiridza isu tinotora basa raShelly Bhomba Harrison uyo akawana zita rake rekodhi achirwisa mabhomba eGlobal Defense Force. Harrison aifanira kuita shanduko yebasa apo akaipa transhumanist mastermind Dr. Jadus Heskel akaburitsa nhengo dzeboka rake recyber mumigwagwa yeNeo DC. Bhomba raiziva, yakanga yave nguva yekutanga kukonzera kuputika panzvimbo pekuvadzivirira.
Icho chinangwa chekuuraya Heskel hachisi chevanoshaya moyo. Tichasiya nzira yekuuraya vazhinji munzira dzakakura dzakasiyana-siyana dzakazadzwa nekuputika kukuru, zvombo zvisingaverengeki zvakavanzika, uye vavengi vasina hunhu kuseri kwekona yega yega. Iko hakuna mukana wekuzvarwa patsva, saka mukana wedu wega weruponeso kupfura nekumhanya.
Mukuda kwedu isu tine zvombo zvakakura zvezvombo, zvine dzimwe nzira dzemoto uye dzakasiyana mhando dzezviputin. Pakati pavo aifarirwa naHarrison, Loverboy ane mipanda mitatu.
Oxygen Isina Kubatanidzwa
Icho chiri pamusoro mutambo iyo isu tinofanirwa kuvimbisa kuenderera uye kukura kwenzvimbo yekoloni umo, sezvakanyorwa zita remusoro, pasina oxygen.
Zvese zviri munzvimbo yako yekoloni zviri pasi pedu, kubva pakuchera uye kupihwa zviwanikwa kusvika kune epombi uye emagetsi masystem. Nekudaro, zviwanikwa zvinotanga kupera kunze kwebhokisi.
Uye kana izvo zvanga zvisina kukwana, iwe zvakare uchafanirwa kuchengetedza vanogarisa vafare panguva yavo yekuzorora.
Upenyu Hwakasimba 2
Sean, wechidiki ane makore gumi nematanhatu, uye munin'ina wake Daniel vanofanira huir kubva kumapurisa uye kutizira kuMexico, nyika yababa vake. Kunge ini handina matambudziko akakwana Sean anofanirwa kubata nemunin'ina wake wemagetsi telekinetic masimba.. Kubudikidza nesarudzo dzatinoita munzvimbo yehama yakura, isu tinodzora zviito zvedu neyaDaniel munzira kubva kuSeattle kuenda kuPuerto Lobos. Zvatinosarudza zvinogona kuona kuti tinosvika zvakanaka here kana kuti kwete
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mitambo yakanakisa yakavanzika ya2019 neshanduro dzeLinux
Mitambo nerutsigiro rwakawedzerwa. Yakanakisa ya2019 neshanduro yeLinux
Huawei achaisa mari mazana maviri emamiriyoni euros mukuvakwa kwefekitori muFrance